Semalt ले वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न Ste चरणहरू सुझाव दिन्छ
Scrap एक खुला स्रोत र विभिन्न वेबसाइट बाट जानकारी निकाल्न को लागी फ्रेमवर्क हो। यसले एपीआईहरू प्रयोग गर्दछ र पाइथनमा लेखिएको छ। Scrap हाल Scrapinghub लिमिटेड नामको एक वेब स्क्र्यापिंग कम्पनी द्वारा मर्मत गरीएको छ।
यो स्क्रिपिको प्रयोग गरेर कसरी वेब क्रलर लेख्ने, क्रिगलिस्ट पार्स गर्ने र CSV ढाँचामा जानकारी भण्डार गर्ने जानकारीको बारेमा सरल ट्यूटोरियल हो। यस ट्यूटोरियलको पाँच मुख्य चरणहरू तल उल्लेख गरिएको छ:
१. नयाँ Scrap प्रोजेक्ट सिर्जना गर्नुहोस्
२. एक वेबसाइट क्रल गर्न डेटा निकाल्न माकुरो लेख्नुहोस्
The. कमान्ड लाइन प्रयोग गरेर स्क्र्याप गरिएको डाटा निर्यात गर्नुहोस्
Links. लिंकहरू अनुसरण गर्न माकुरो परिवर्तन गर्नुहोस्
Sp. माकुरो तर्क प्रयोग गर्नुहोस्
१. परियोजना बनाउनुहोस्
पहिलो चरण भनेको परियोजना बनाउनु हो। तपाईंले Scrap डाउनलोड र स्थापना गर्नु पर्छ। यसको खोजी पट्टीमा, तपाईंले डाइरेक्टरी नाम प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ जहाँ तपाईं डाटा भण्डारण गर्न चाहानुहुन्छ। Scrap ले जानकारी निकाल्नको लागि बिभिन्न माकुरो प्रयोग गर्दछ, र यी माकुराले निर्देशिकाहरू सिर्जना गर्न प्रारम्भिक अनुरोध गर्दछ। कामको लागि माकुरो राख्नको लागि, तपाईंले डाइरेक्टरीहरूको सूची भ्रमण गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ विशेष कोड घुसाउनु पर्छ। तपाईंको हालको डाइरेक्टरीमा फाईलहरूमा नजर राख्नुहोस् र दुई नयाँ फाईलहरू हेर्नुहोस्: quotes-a.html र quotes-b.html।
२. एक वेबसाइट क्रल गर्न डेटा निकाल्न माकुरो लेख्नुहोस्।
एउटा स्पाइडर र डाटा निकाल्ने उत्तम तरिकाले Scrap को शेलमा बिभिन्न चयनकर्ताहरू सिर्जना गर्दैछ। तपाईंले सँधै उद्धरणमा यूआरएलहरू संलग्न गर्नुपर्दछ; अन्यथा, Scrap प्रकृति वा ती URL को नाम तुरन्त परिवर्तन हुनेछ। तपाईले एक यूआरएल वरपर डबल उद्धरणहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ ठीकसँग माकुरा लेख्न। तपाईंले.extract_first () को उपयोग गर्नु पर्छ र सूचकांक त्रुटिबाट बच्नुहोस्।
The. कमान्ड लाइन प्रयोग गरेर स्क्र्याप गरिएको डाटा निर्यात गर्नुहोस्:
कमान्ड लाइन प्रयोग गरेर स्क्र्याप गरिएको डाटा निर्यात गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं यसलाई निर्यात गर्नुहुन्न भने, तपाईं सही परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन। यो स्पाइडर उपयोगी जानकारी समावेश विभिन्न निर्देशिका सिर्जना गर्दछ। तपाईंले उपज पायथन कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ यस जानकारीलाई उत्तम तरीकाले निर्यात गर्न। JSON फाईलहरूमा डाटा आयात गर्न सम्भव छ। JSON फाईलहरू प्रोग्रामरहरूको लागि उपयोगी छन्। JQ जस्ता उपकरणहरूले कुनै समस्या बिना नै स्क्र्याप गरिएको डाटा निर्यात गर्न मद्दत गर्दछ।
Links. लिंक अनुसरण गर्न माकुरा परिवर्तन गर्नुहोस्:
साना प्रोजेक्टहरूमा, तपाइँ लिंकहरू उचित तरिकाले अनुसरण गर्न माकुरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर ठूलो आकारको डाटा स्क्र्यापिंग परियोजनाहरूको साथ यो आवश्यक छैन। आईटम पाइपलाइन्सको लागि एउटा प्लेसहोल्डर फाईल सेटअप हुनेछ जब तपाईं माकुरा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यो फाईल ट्यूटोरियल / पाइपलाइन.पि सेक्शनमा अवस्थित गर्न सकिन्छ। Scrap साथ, तपाईं परिष्कृत मकड़ियों निर्माण र कुनै पनि समय तिनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक पटकमा धेरै साइटहरू निकाल्न र विभिन्न डाटा निकासी परियोजनाहरू पूरा गर्न सक्नुहुनेछ।
Sp. माकुरो तर्क प्रयोग गर्नुहोस्:
Parse_author कलब्याक एक स्पाइडर आर्गुमेन्ट हो जुन गतिशील वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईले विशेष कोडको साथ माकुरोलाई आदेश रेखा तर्कहरू पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। माकुरो तर्क कुनै समय मा माकुरो विशेषता बन्न र आफ्नो डाटा को समग्र रूप परिवर्तन।
यस ट्यूटोरियलमा हामीले केवल Scrap का आधारभूत कुराहरू मात्र समेट्यौं। यस उपकरणका लागि त्यहाँ धेरै सुविधाहरू र विकल्पहरू छन्। तपाईंले भर्खरै डाउनलोड र सक्रिय गर्न यसको यसको विशिष्टताको बारेमा बढी जान्न आवश्यक छ।